တရုတ်အစိုးရ ဇာတိပြလာပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တရုတ်အစိုးရ ဇာတိပြလာပြီ
Posted by phone_kyaw on Jun 27, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
တရုတ်အစိုးရပိုင် ဂလိုဘယ်တိုင်းစ် ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်းသတင်းစာမှာရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးကို ရှယ်ချင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရေးသူက သူရဲ ့အမြင်ကို တင်ပြထားတာပါ။ သူကတော့ အကြီးတန်းအယ်ဒီတာတစ်ဦးဆိုတော့ တရုတ်အစိုးရရဲ ့မြန်မာပြည်နဲ ့ပက်သက်တဲ့မှုဝါဒကို တင်ပြသလိုပါပဲ။
– ဒေါ်စုရဲ ့ဥရောပခရီးစဉ်ဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ ့အောင်မြင်မှု ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ပါ။
– ဒေါ်စုဟာ ကုလားအရေးနဲ ့ကချင်အရေးမှာ ပါဝင်မှုနည်းသလို အခြားတိုင်းရင်းသားအရေးမှာလည်း ပါဝင်မှု အားမကောင်းပါ။
– ဒီမိုကရေစီကို အရမ်းပေးရင် တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်း ပိုလို ့တောင် သတ်နိုင်တယ်။ ဆိုလိုတာက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲ သူတို ့ကြိုက်ပုံရတယ်။
– ရိုဟင်ဂျာအရေးကို တရုတ်အစိုးရက တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပုံရတယ်။ (ကျနော့်အမြင်)
– ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီး တစ်လုံးတည်း ပြောရမယ်ဆိုရင် တရုတ်အစိုးရက လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ ့အပြောင်းအလဲကို အထူးမလိုလားသလိုပဲ။
– ဒါ့ကြောင့် ပြည်တွင်းဗီးနပ်စ်ဂျာနယ်ရဲ ့အယ်ဒီတာ့အာဘော်မှာတောင် ဒီဆောင်းပါးနဲ ့ပက်သက်ပြီး အတိအလင်း ကန် ့ကွက်နေတယ်။
– တရုတ်အစိုးရဟာ မြစ်ဆုံဆည်အရေးနဲ ့ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ အတော်လေးစိတ်ထိခိုက်သွားပုံရတယ်။ သူ တို ့အကျိုးအမြတ် ဆုံးရှုံးမှာကိုမလိုလားဘူး။ ပြည်တွင်းထဲက တရုတ်လူမျိူးအရေးနဲ ့ပက်သက်ပြီးလည်း တွေးပြီးကြောက်နေပုံရတယ်။
– ဒါ့ကြောင့် လက်ရှိဦးသိန်းစိန်ရဲ ့ပြုပြင်ပြောင်လဲမှု ့ကို တရုတ်အစိုးရက လုံးဝကို မနှစ်မြို ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီဆောင်းပါးက သက်သေပြနေတယ်။
– တရုတ်ပြည်ဟာ မြန်မာပြည်ကို သူတို ့ရဲ ့ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီးဆက်ဆံလာတာ ကြာပြီ။
-ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို လက်သက်မွေးတယ်။ မဟန်တော့ စစ်အစိုးရနဲ ့ပေါင်းပြီး တိုင်းပြည်ရဲ ့သယံဇာတကို ဂုတ်သွေးစုတ်တယ်။ အခုလက်ရှိ ဒီမိုကရေစီအရေးမှာလည်း တရုတ်အစိုးရက ကန် ့လန် ့သွားမဲ့ပုံပေါက်နေတဲ့အတွက် မြန်မာတွေ သတိရှိဖို ့လိုကြောင်း အသိပေးချင်တယ်။
– နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးမှာ စကားကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကတော့အမြဲတမ်း မိတ်ဆွေမရှိဘူး။ အမြဲတမ်းအကျိူးစီးပွားပဲရှိတယ်။ ဒီစကားနဲ ့ပက်သက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင် ငတ်ပြတ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအရေးကို ကူညီဖို ့ထက် သူတို ့အမြတ်ရဖို ့က အဓိကဖြစ်တယ်။
– ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေဟာ ဘယ်တော့မှ မြန်မာပြည်က ဒုက္ခသည်တွေ လက်ခံခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ လစ်ဘရယ်နိုင်ငံတွေကသာလျှင် လက်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။
– ကွန်မြူနစ်က လစ်ဘရယ်ကိုကြည့်မရတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာပြည်က ကြားညှပ်သွားခဲ့နှစ်က နည်းတာမဟုတ်ဘူး။
– ဒီအခြေအနေကနေ ဦးသိန်းစိန်နဲ ့ဘက်ပေါင်းစုံက နိုင်ငံရေးအင်အားစု တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေ အမြန်ဆုံးရုန်းထွက်နိုင်မယ်လို ့မျှော်လင့်တယ်။
– တရုတ်လူမျိူးတွေကို ဆန် ့ကျင်ဖို ့ဒီစာဖြန် ့တာမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်အစိုးရရဲ ့လုပ်ရပ်ကိုသာဆန် ့ကျင်တာဖြစ်တယ်။
Democracy no panacea for Myanmar’s woes
Global Times | 2012-6-20 19:50:02
More Sharing Services14
http://www.globaltimes.cn/Portals/0/images/email.jpg E-mail http://www.globaltimes.cn/images/print.gifPrint
Myanmar’s opposition leader Aung San Suu Kyi finally accepted the Nobel Peace Prize, which she won in 1991, and deliveredalong-overdue speech in Norway on Saturday. The heads of some European countries also met with her, and held state-level receptions for her.
The enthusiasm of these European leaders is more likeademonstration of their “victory,” rather than hospitality for Suu Kyi. Suu Kyi belongs to Myanmar, but she belongs more to Europe. In the eyes of these European leaders, without the political and economic pressure they helped exert, Myanmar wouldn’t have witnessed the changes it’s undergoing today.
However, at this stage, what most deserves attention is probably not Suu Kyi, but the complex ethnic and religious conflict taking place in Myanmar’s Rakhine state, and the tens of thousands of stateless Rohingya refugees who live there.
After the clash between the Muslim Rohingya and the Buddhist Rakhine people, some Muslims in Rangoon visited Suu Kyi, in the hope of getting suggestions from Suu Kyi and her National League for Democracy (NLD) party. But Suu Kyi didn’t seem to haveasolution either. She briefly talked with them, and asked them to turn to the government to get the problem solved.
In fact, more thanafew ethnic minority groups in Myanmar do not have enough trust in Suu Kyi and the NLD under her leadership. The NLD also lacks the capability to communicate and coordinate in this regard. If the NLD really hopes to achieve ethnic reconciliation, they have to set up more direct contacts and establish mutual trust with ethnic minority groups.
The violent conflict in the Rakhine state disclosed again the soft spot of Myanmar, its ethnic conflicts. This is directly related to the legacy of British colonial rule. In the frontier regions of Myanmar, local ethnic minority groups have never built upasense of “national identity.” And the Rohingya people have never been recognized as an indigenous ethnic group, and have thus become stateless refugees.
The reforms being carried out by the current Myanmese government, especially since the government has achievedaceasefire agreement with the independent armed forces from many minority groups, are bringing unprecedented hope for the nation’s prospects.
However, Myanmar’s complex ethnic problems cannot be fixed either in the short term, or by the appearance of one or two opposition leaders. It isapolitical, economic, social, and cultural issue.
In fact, some Southeast Asian countries have already started to practice the Western-style democracy, but their ethnic conflicts remain. The problems of ethnic integration are still haunting these countries.
What’s happening in West Asia and North Africa is also an example. The elections in Egypt may further split the society and even trigger more religious conflict.
True, there are indeed differences between countries in Southeast Asia and those in West Asia and North Africa. One of the differences is that Southeast Asian countries have better conditions of economic development.
Most Southeast Asian countries have already occupiedacertain position in the global industrial chain, which provides an economic basis for them to solve ethnic conflicts.
However,amore severe challenge facing Southeast Asian countries like Myanmar is that if they are too heavily influenced by the West and excessively stress Western models during their system transformation, they may face long-term turbulence in the future. A weak, divided government isn’t able to solve complex ethnic problems.
What’s worse, situations in border areas may get worse and run out of control. Excessive and hasty democracy may bury the fragile reconciliation which has just been achieved.
John Funston, an Australian scholar and expert in Southeast Asian studies, wrote in his book Government and Politics in Southeast Asia (2001) that better governance, including more democracy, is widely seen as progress, but it’s not the universal elixir that some believe in. More democracy may provide chances for all kinds of extremists.
The author isasenior editor with People’s Daily. He is now stationed in Bangkok. dinggang@globaltimes.com.cn
ခုလိုဘာသာပြန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးဘဲ ကိုဘုန်းကျော်ရေ
ကျနော်ကိုယ်တိုင်တရုတ်သွေးပါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့ တရုတ်အစိုးရရဲ့စိတ်သဘောထားလုံးဝမကြိုက်ပါ…
သူနိုင်ငံမှာလဲ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိ အုပ်ချုပ်သူအပိုင်းနဲ့ပြည်သူ
တဖြေးဖြေးကွာဟ လာနေပါပြီ..ဒီလိုပုံစံအတိုင်းစနစ်မပြောင်းဘဲ သွားနေလို့ကတော့
တချိန်မှာ အဏာမက်မောတဲ့အဏာရှင်လူတစု ပေါင်းစည်းမိခဲ့ယင်
( ကလားမြန်မာ အရေးခင်းကို လုပ်ကြံမှု့လို့ ထင်သာမြင်သာရှိလာရင်တော့
ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကြီးဟာ လူတစ်စုရဲ့ လက်ထဲကနေထိမ်းကြောင်းတာ
ခံနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျုပ်တို့ နားလည်ရမယ် ) လို့
ဟယ် နာလည်း တလုပ်ဘဲ
ကိုဘုန်းကျော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ့်အကျိုးရှိတဲ့ပို့စ်လေးပါဗျာ
သည်ပို ့စ်အတွက်တော့ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပါရစေဗျို ့။
တရုတ်လူမျိူးတွေကို ဆန် ့ကျင်ဖို ့ဒီစာဖြန် ့တာမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်အစိုးရရဲ ့လုပ်ရပ်ကိုသာဆန် ့ကျင်တာဖြစ်တယ်။
ကိုဘုန်းကျော် သံမှန်လေးနဲ့ အမြင်ကောင်းလေးတွေ တင်ပြတတ်ပါတယ်..
မှန်လိုက်တာကိုဘုန်းကျော်ရယ်………သွေးထွက်အောင်မှန်တယ်။ တယုတ်တွေက မြန်မာပြည်နဲ့
မြန်မာပြည်သားတွေကို ဂုတ်သွေးစုပ်ဖို့လောက်ကလွဲပြီး ဘယ်တုန်းကမှစေတနာမှန်ရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။
သတိချပ်စရာပါဘဲ….. ကြားဖူးသလောက်ပြောရရင် တရုတ်လူမျိုးတွေကလည်း မြန်မာပြည်ကို သိပ်စိတ်မဝင်စားဘူးဗျို့( မြန်မာပြည်ပေါက် တရုတ်နှင့် လက်ရှိဆက်စပ် ကုန်သွယ်စီးပွားလုပ်နေသူ မပါ) တရုတ်ပြည်ရဲ့ အဓိက မြို့ကြီးတွေမှာ နေထိုင်သူ ပညာတတ် ဥစ္စာဓနပေါသူ အသိုင်းအဝိုင်းက သူတို့ရဲ့ အဓိက Targetကို အမေရိကနဲ့ ဥရောပကို ထားသဗျ တချိန်က ဆန်တစ်ကျင်ကို တမျိုးလုံး တဆွေလုံး စုပေါင်းစားခဲ့ရတဲ့ ခေတ်ကို သိမှီတဲ့ တရုတ်ဘိုးဘေးတွေက သူတို့မြေးမြစ်တွေကို ခုချိန်ခါမှာ သူတို့လို မဖြစ်စေချင်ကြဘူး ဒီတော့ အားလုံးက ပန်းသီးထုတ်ကုန်တွေနဲ့ အီတလီဒီဇိုင်းတွေ ပြင်သစ်မွှေးရနံ့တွေကို ပျော်ဝင်စေချင်ကြတယ်။ တရုတ်အစိုးရ ထိပ်တန်းပိုင်းတွေကလဲ မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် သိပ်ခေါင်းစားမခံဘူး သူတို့ပါတီဝင် ယွဲနန်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက တင်ပြလာရင် ကောင်းမယ်ထင်လို့ကတော့ အကုန်လွှတ်ပေးသဗျ… စီချွမ်ငလျင် ဖြစ်တော့ တရုတ်အစိုးရက ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမေးတယ် အဲဒီဒေသက စိုက်ပျိုးရေး၊ စီးပွားရေး၊ စက်မှုလယ်ယာ လာတစ်ခုမှ အဆင်မပြေဘူး တနေ့တနေ့ ကချင်ပြည်နယ် အစွန်းပိုင်းက ခိုးဝင်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က ဆီ၊ဆန်၊ဆား၊ကြက်သွန်တွေနဲ့ ရပ်တည်နေရတာ။ ဆိုတော့ ဝန်ကြီးချုပ်က အဲဒေသက လူတွေကို အောက်ဘက်ပိုင်း ယွဲယ်နန်ပြည်နယ်ဘက် ရွှေ့ခိုင်းပီး ပြည်မကြီးက ဘဏ်တွေကတဆင့် ချေးငွေတွေပေး အလုပ်အကိုင်တွေ ထူထောင်ပေးနဲ့ အဆင်ပြေလာကြသဗျ။ ခုထက်ထိ တရုတ်ပြည်မကြီး အတွင်းပိုင်းက မြန်မာပြည်ဆို ကောင်းကောင်း မသိကြဘူး မြေပုံထဲမှာ ထောက်ပြရင်တောင် မသဲကွဲဘူး
ဘာပြောချင်သလဲဆိုတော့ လက်ရှိ မြန်မာနဲ့ တရုတ် ဆက်ဆံရေးဟာ အစိုးရပိုင်း အဆင့်မှာတောင် ယွဲနန်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးကို မကျော်နိူင်သေးဘူး နောက်ပီး အစိုးရပိုင်းလူကြီး ဝန်ပျင်းတွေလောက်ကလဲ ကိုဘာမှမတတ် မသိတော့ ပွဲစားတွေလောက်နဲ့ဘဲ အလုပ်လုပ်နေရတာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီမံကိန်းအဆင့် ဆိုတာတွေက အာဖရိကကို ရောင်းနေတဲ့ ဘယာဇီယာ လောက်တောင် ကွာလတီမရှိဘူး ဒါကလဲ ပွဲစားတွေနဲ့ လူကြီးပျင်းတွေကြောင့် ဒီတော့ဗျာ မြန်မာနဲ့ပတ်သတ်ပီး တရုတ်အစိုးရရဲ့ မူဝါဒကို လောလောဆယ်မှာတော့ မကြောက်သေးကြောင်း………………………..
တရုတ်နဲ့ မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို အလေးထားမယ် ဆိုရင်ဖြင့် ပြည်တွင်းက ပွဲစားတွေနဲ့(နိူင်ငံရေး၊စီးပွားရေး) နယ်နမိတ်ကပ်နေတဲ့
ဒေသကြီးက လူတွေကို အစိုးရအနေနဲ့ ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်မယ် ဆိုရင်ဖြင့် နောင် ဆယ်နှစ်လောက် အထိ အာမခံနိူင်ကြောင်း……( ကျနော့် အမြင်လေးပါ)
ဟုတ်တယ်..မိုနာ တို့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ “မဟုတ် တရုပ် ” နဲ့” ကလေး ကုလား”ဖြစ်နေတယ်…
တရုတ်အစိုးရကို လုံးဝ (လုံးဝ) ကန့်ကွက်ဒယ်
ရှုပ်ချဒယ်၊ ၆ညင်ကတ်ဒယ်၊ ဒါဗြဲ
ကချင်ပြည်နယ် အရေး၊ ရခိုင် အရေး နဲ့ တာဝါတိုင် ဖောက်ခွဲ ခံရ ပြီး ရန်ကုန် အပါ အဝင် မြို့ နယ် အနှံ့ အပြား လျှပ်စစ် မီး ပြတ်တောက်မှု တွေ မှာ တရုတ် အစိုးရ အနေနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ အပေါ် ထားရှိ တဲ့ သဘောထား အမှန်ကို ဖွင့် ချ ပြနိုင် ခဲ့ တယ်။
ဟို အရင် ထဲ က တရုတ် အစိုးရ ဟာ မြန်မာ ပြည် မရိုးသားဘူး ဆို တာကို သိသိ ကြီးနဲ့ ကောင်း ပါတယ် ဆို တဲ့ စစ်အစိုးရ ပါ ငြင်းချက် ထုတ် မရတော့ အောင် အဲဒီ အရေးအခင်း တွေ က သက်သေ ပြခဲ့ တာပါ။
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊မျက်စေ့ပွင့်၊နားပွင့် တိုးတက်မှာတင်မက၊ သူ့ပါတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေအား လုံးအဲလိုဖြစ်သွားမှာကိုအရမ်းကြာက်တဲ့နေရာမှာ-
(2)သူ့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အနောက်အုပ်စုမဟာမိတ်များဝိုင်းလာခြင်းအားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိလာလျှင် သူပြည်သူများကပါ၊သူတို့ရဲ့အာဏာချုပ်ကိုင်မှုအပေါ်ထပ်မံအုံကြွမှာကိုကြောက်ရွှံ့ခြင်း။
(4)သူ့နိုင်ငံမှပြည်ပအရင်းအနှီးများ၏၊ခိုင်မာမှုအတွက်စိုးရိမ်လာခြင်း၊ အားလုံးဟာသူ့အကျိုးအတွက် ပဲ ကြည့်ပြီးတစ်ဖက်သတ်ကြောက်လန့်နေတာထင်ရှားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကြံ့ဖွတ်မှ ဌေးဦးနှင့်တရုတ်မှာပြောကြတာတွေမယ်၊တစ်ပါတီအာဏာရှင်တာကောင်းတယ်ဆို
လည်းဝင်စွက်ပြီး ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆို ဟင့်တွေပေးခဲ့တယ်၊(မော်နီတာဂျာနယ်၊ ဇွန်(2)ရက်ထုတ်၊အတွဲ
8 မှာ) သေချာလေ့လာကြပါ။ တိုင်းရင်းသားအရေးတွေနဲ့ ဖန်တီးပြီး၊ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ဌေးဦးမှ မြန်မာပြည်
ပြည်ပအားကိုးပုစိန်ရိုးတဲ့ ၊ တရုတ်အားကိုးတော့——-ပေါ့။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်တို့အုပ်စုလျှောက်နေတဲ့လမ်းဖြောင့်ပေါ်မှ ဌေးဦးရဲ့ ကောက်ကွေ့ပြီး၊မြန်မာပြည်မှ